२० वर्षमा १५ बच्चा जन्माउने यी अनौठी महिला – Everest Dainik – News from Nepal
२० वर्षमा १५ बच्चा जन्माउने यी अनौठी महिला
कुनै महिलाले २० वर्षमा कति बच्चा जन्माउन सक्लिन ? धेरैको उत्रर हुन सक्छ ३ अथवा ४ । तर कहिल्यै सुन्नु भएको छ । कुनै महिलाले २० वर्षमा १५ वटा बच्चा जन्माउन ? ब्रिटेनमा बस्ने क्यारोल हरलक जो अहिले ४९ वर्षकी भइन । उनी आफ्ना दुईवटा बच्चासहित अरु १५ बच्चाकी आमा हुन ।
त्यसैले क्यारोल हरलकलाई संसारकै सबैभन्दा बलियो गर्भाशय भएकी महिला भनिएको छ । यधपि क्यारोल एक प्रोफेशनल सरोगेट मदर ( व्यवसायिक गर्भभाडामा दिने आमा) हुन र आजसम्म१५ वटा बच्चा जन्माई सकेकी छन् । यस बाहेक उनी अरु १६ वटा बच्चा जन्माउने तयारीमा रहेकाे बताइकी छन् । क्यारोलका अनुसार केही समय पहिला उनी उच्च राक्तचापबाट पीडित थिइन । र चिकित्सकले अरु बच्चा नजन्माउन भनेका थिए ।
क्यारोलको भनाइमा उनलाई आफ्नो स्वास्थ्यको कुनै प्रवाह छैन र उनी प्राकृतिक रुपमा भन्दा कृत्रिम (सिजेरियन) बाट बच्चा जन्माउन चाहान्छिन् । पछिल्लो २० वर्षमा उनले १३ बच्चा जन्माइ सकेकी छन् । यस बाहेक उनका २४ र २१ वर्षका दुईवटी छोरी पनि छन् । एजेन्सी
ट्याग्स: Carol Harlock, London